MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EE LOO YAQAAN 'JAPANESE CHIN DOG' - EEYAHA
'Tani waa Niko. Wuxuu ku jiraa 1 1/2 sano jir sawirkan. Isagu waa runsheeg fasal. Isagu had iyo jeer wuu iga qosliyaa aniga iyo asxaabteyda wuuna naga yaabiyaa sababta uu u sameeyo waxyaalihiisa waalan.
Liiska eeyaha isku dhafan ee loo yaqaan 'Chin Mix Breed'
Jabaaniis Isbaanish ah
Garka Jabaan ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Chin ama Japanese Spaniel. Waa wax yar oo isbaanish ah oo ujeedadiisa kaliya ee loo abuuray ay tahay inuu u adeego nin wehel ah. Garka wuxuu leeyahay madax ballaaran, ballaaran, indho ballaaran oo ballaadhan leh, iyo af gaaban, oo weyn. Dhegaha waa yar yihiin, V-gareeyaan, waa la kala ballaadhay oo wax yar ayay ka hooseeyaan taajka dhakada, oo si fiican timo loogu daboolay. Wejiga waa wareegsan yahay. Joogsigu waa qoto dheer yahay, xuubkuna waa gaaban yahay wuuna ballaaran yahay. Sanka ayaa ballaaran oo leh kanaal aad u gaaban oo sanka ah. Sanku waa madowyahay eeyo madow iyo caddaan ah, eyda kale ee midabada leh midabka sanku waa inuu u dhigmaa midabka calaamadaha jaakadda. Indhaha waa la kala fogeeyay, weynaan, wareegsan, iyo midab madow. Indhaha si fiican ayaa loo dejiyaa, laakiin waa inaysan qoto dheer dhigin. Waa marka ay indhuhu soo baxaan oo ay sidaa fudud u dhaawacmaan. Qaniinyada ayaa wax yar ka hooseysa. Jirka iyo dhererkiisu waa isku mid. Lugaha hore waa toosan yihiin waana lafiican yihiin, xusulkuna u dhow yahay jirka. Dabada ayaa sare loo dhigay oo waxaa lagu qaaday dhinaca dambe ee dhabarka, iyadoo loo laallaadinayo labada dhinac eeyga oo baal leh. Koodhku waa caddaan leh dhejisyo midab leh. Balastarradu badanaa waa madow, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan casaan, liin, oranjo, jilicsan, madow iyo caddaan leh dhibco madow, ama bir.
Japanese Chinka waa xayawaan soo jiidasho leh, nool, oo faraxsan. Waa wax lagu farxo, kalgacal, caqli badan, kalgacal leh oo aad ugu heellan sayidkeeda. Cunnadani waxay jeceshahay qof kasta oo ay taqaan, laakiin waxaa loo yaqaanaa in lagu habeeyo shisheeyaha iyo xaaladaha aan la aqoon eey si fiican ula dhaqan eygan. Haddii aad leedahay carruur yaryar, bar inay si fiican oo naxariis leh ula eegaan. Digaagga ayaa ku wanaagsan eyda kale iyo xayawaanka rabaayadda ah. Chin Chinka ayaa leh maskax u gaar ah waxayna jeceshahay inay noqoto bartamaha dareenka. Tarankaani maahan wax warran. Waa mid dabeecad fudud, qurux badan, haddana ciyaar leh. Xasaasi ah, kacsan, jilicsan oo nadiif ah. Ilaa iyo intaad dejineysid xeerar eeygu u baahan yahay inuu raaco, xaddidnaana waxa loo oggol yahay inuu sameeyo, oo aad siiso hoggaan joogto ah, Garka ayaa adeeci doona. Chins sidoo kale waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan. Garka loo yaqaan 'Chin Chin' ayaa lagu bari karaa inuu sameeyo tabo. Hubso inaad noqoto hogaamiyaha xirmada eeygan. Ha u ogolaan eeyga inuu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeyaha ay rumeysan yihiin inay yihiin hoggaamiyeyaasha xirmada aadanaha. Garka loo oggol yahay inuu hoggaamiyeyaal u noqdo aadanaha ayaa horumarin doona dhammaan noocyada kala duwanaanta dhibaatooyinka dabeecadaha, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, kala-go'id walaac , qabsashada, cabaadka iyo ilaalin , Looma aamini doono carruurta.
Dhererka: 7 - 11 inji (18 - 28 cm)
Miisaanka: 4 rodol (2 kg) - 15 rodol (7 kg)
Waxaa jira laba nooc oo ah Jaanis Jabaan ah: oo ka hooseeya 7 rodol, iyo in ka badan 7 rodol.
U nuglaanshaha dhibaatooyinka neef-mareenka, sujuudda kuleylka iyo shahwo-xumada. U janjeerso hindhiso iyo khuuro. Sidoo kale u nugul arrimaha indhaha. Markaad qorsheyneyso eeyaha taranka ee leh indhaha soo baxa waa inaan la aqbalin. Iibiyaha yar yar ee loo yaqaan 'puppy iibsaduhu' wuxuu u baahan yahay inuu ka warqabo in eey yar oo indho indheysan ay u nugul yihiin arrimaha isla markaana ay u diyaargaroobaan taas.
Garka Jabbaanku waa eey u fiican nolosha guriga. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan la'aan deyr. Noocani wuxuu xoogaa xasaasi u yahay heerkulka daran.
Garka gudihiisa uma baahna jimicsi weyn, si kastaba ha noqotee waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah . Waxay ku raaxeysan doonaan fursadda ay ku ciyaaraan deyr furan.
Celcelis ka yar 10 sano.
Qiyaastii 1 ilaa 5 eyyo
Dhowr daqiiqadood maalin walba waxay ilaalin doontaa jaakadda oo u muuqata mid qurux badan. Shanle shanlo isku xoq oo si tartiib ah u caday, kor u qaad timaha si aad ugaga tagto in yar oo taagan. Nadiifi indhaha maalin kasta oo si joogto ah uga eeg dhegaha dhegaha wixii calaamado ah ee infekshin ah. Shampoo qallaji marmar oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Asal ahaan waxaa loogu yeeri jiray Japanese Spaniel, welina kooxahaas qaar ayaa ugu yeera magacaas, Spaniel-ka Japanese-ka ah waxaa AKC u beddelay 'Japanese Chin' sanadkii 1977. Japanese Chinka waxaa ugu horreeya uguna horreeya eeyo loo weheshado. In kasta oo magaca 'Jabaan' uu haddana caaryuhu ka soo jeedo dhulka Shiinaha. Mar dambe ayaa lagu horumariyey Japan waxaana loo soo bandhigay Yurub 1700. Waxay noqotay mid ay aad u jecel yihiin dadka reer Japan ee sharafta leh, waxaana had iyo jeer loo siiyaa hadiyad boqortooyo diblomaasiyiinta iyo shisheeyaha u qabtay Japan adeeg aad u wanaagsan. 1853 lamaane ayaa hadiyad ahaan loo siiyay Boqorada Victoria oo ka timid Commodore Perry markii uu ka soo laabtay howlihiisii ​​taariikhiga ahaa ee ahaa inuu Japan u furo ganacsiga aduunka.
'Kani waa Akira. Isagu ma ahan da'yar 1 jir ah sawirkan, laakiin waa eeyga ugu caqliga badan ee aan abid leeyahay. Waa qof cod badan marka uu doonayo in uu ciyaaro ama aado musqusha. Halkan wuxuu ku seexanayaa qorraxda. '
Mochi Japanese Chin waa wiil yar oo qurux badan oo reer Jarmal ah oo aad u ciyaara, jecel inuu ku sii socdo orod, mar walbana waxaa ka buuxa waxyaabo yaab leh.
Kani waa 4 jir Willy ah.
'Abby, my albino Japanese Chin-Waxaan aaminsanahay Abby iyo inaan isu egnahay.'
Astroboy the Japanese Chin - milkiilihiisa ayaa leh, Wuxuu leeyahay shakhsiyad qosol leh laakiin daryeel leh. Sawirkaan wuxuu isku dayayaa inuu igu soo dhuunto. '
'Tani waa Tiger. Wuxuu jecel yahay inuu ii sujuudo inta uusan banaanka ka soo galin. Wuu sameeyaa markasta.
'Kani waa Jaankeyga Japanese-ka ah ee la yiraahdo Zorro (wejiga maaskaro u eg dartiis). Waxaan ku noolahay New Zealand. Waxaan u maleynayaa inuu aad ugu egyahay Gizmo boggaaga horeyba! Wuxuu ku jiraa 10 toddobaad sawirada. '
chihuahua iyo jack russell terrier mix
Zorro eeyaha yar yar ee Jabbaan 10 jir ah
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Garka Jabaan
Sawirada Chin Chin 1
Eyda Chinka ee Jabaan: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
ridgeback rhodesian qasan adhijir Jarmal
bulldog american mix retriever mix
sawirada poodles toy madow
eyda ey ka bilaabmaan r